Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Reincarnation an'ny mpamorona Opera Richard Strauss | Mpanakanto mozika sy Opera Ankizy Alma Deutscher - fikarohana Reincarnation
Richard Strauss dia teraka tao 1864, any Alemaina. Izy dia mpitendry mozika, mpitantana ary mpamoron-kira. Nahomby indrindra izy tamin'ny famoronana opera ary efa nanapa-kevitra fa ny fampisehoana azy no zava-bita faharoan'ny mpanakanto amin'izao vanim-potoana maoderina izao. Maty tao amin'ny 1949 i Strauss.
Alma Deutscher dia teraka tao 2005, any Angletera. Mpihira mozika prodigy zaza izy ary amin'ny faha-10 dia nanokatra opera voalohany izy. Ny manam-pahaizana momba ny mozika dia nanamarika fa ny fahafahany mamorona «opera» sy «orchestral» amin'ny vanim-potoana kely dia mahavariana, satria izany dia mitaky fahalalana momba izay feo sy maneno ny zavamaneno isan-karazany. Raha ny mahazatra, ity fahaiza-manao ity dia maka fotoana maharitra amin'ny mozika hianarana.
Nijery aho 60 Minutes fandaharana amin'ny fahitalavitra any Etazonia izay namaritana ireo talenta nataon'i Almà. Nandritra ny fandaharana aho dia nahita ny hevitra fa i Almà no fananganana an'i Richard Strauss, na dia tsy nahalala firy momba an'i Strauss aza aho.
Nandritra ny fotoam-pivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson, mpampita trance izay mandefa fitarihana fanahy antsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaiza-manao ny lalao amin'ny fiainany taloha miaraka amin'ny mari-pahaizana avo lenta, dia nanamafy i Ahtun Re fa i Alma Deutscher no reinkarnasyon nataon'i Richard Strauss.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fampitoviana endri-javatra eo amin'ny endrik'i Richard Strauss sy i Alba Deutscher, na dia mila jerena ihany aza io fitoviana io rehefa matotra i Alba.
Ny tranga iray izay ahitana endrika endrika ara-batana voarakitra hatramin'ny fahazazana ka hatramin'ny maha-olon-dehibe azy, izay nanamarina ny fitoviana amin'ny endrik-tarehy hatrany amin'ny fiainana ka hatramin'ny iray hafa, dia izao:
Ny famokarana zaza, ny talenta amin'ny fiainana taloha: Ilay haino aman-jery Richard Richard Strauss dia mamirapiratra eo amin'ny fiainan'i Alba Deutscher.
Fiovam-pirenena: Teraka tany Alemaina i Richard Strauss, raha i Alba Deutscher dia teraka tany Angletera. Ny fahafantarana fa ny fanahy iray dia mety ho teraka any amin'ny firenena samy hafa sy ny lova ara-poko dia afaka manampy ny tontolo ho toerana milamina kokoa satria ny ankamaroan'ny ady dia mifototra amin'ny tsy fitoviana amin'ireo marika ara-kolotsaina ireo.
Fampivoarana mozika fomba